विप्लव र नेपाल सरकारबीच छुटेकाे चाैथाे बुँदा - DURBAR TIMES
HomePoliticsविप्लव र नेपाल सरकारबीच छुटेकाे चाैथाे बुँदा
विप्लव र नेपाल सरकारबीच छुटेकाे चाैथाे बुँदा
नेपाल सरकार र भूमिगत अवस्थामा रहेकाे प्रतिबन्धित विप्लव पक्षबीच हिजाे राष्ट्रिय सभागृहमा भएकाे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा विप्लव पक्ष हतियार छाडेर मूलधारकाे राजनीतिमा आउन सहमत भएकाे छ । तर तीनबुँदै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएकाे भनेर सार्वजनिक भएका विप्लव र नेपाल सरकारबीच चाैथाे बुँदा पनि हुनुपर्ने तर छुटाइएकाे भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरूले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।
चाैथाे बुँदा अर्थात विप्लव पक्षले प्रयाेग गरेका र गर्दै आएका हतियारहरूकाे बारेमा कहिँ कतै उल्लेख गरिएकाे छैन । ती हतियारहरू कहाँ छन् ? तिनीहरूकाे स्वामीत्व कसले लिने ? विप्लवसँग कति लडाकुहरू थिए ? अब तिनीहरूकाे व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ ? केही उल्लेख गरिएकाे छैन । यतिसम्म कि अन्य कुराहरू प्रकृयागत ढंगले अगाडी बढाइनेछ भनेर समेत उल्लेख गरिएकाे छैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसकाे बदरपश्चात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकाे कुर्सी हल्लिएकाे सन्दर्भमा अकस्मात विप्लव पक्षसँग साझेदारी गर्नुपरेकाे तर्कपनि कतिपयकाे छ । लगातार वार्ता असफल भइरहेका बेला सरकारी पक्षले के त्यस्ताे प्रस्ताव गर्याे जसकाे कारण विप्लव पक्ष अकस्मात सहमत हुन पुग्याे ? भन्ने पनि तर्कहरू सुनिन थालेका छन् ।
भूमिगत हुँदा प्रयाेगमा ल्याएका र ल्याउन तयारी भैरहेका हतियारहरूकाे बारेमा खाेजिनीति नगरे भाेली फेरी ती हतियारहरू प्रयाेग हुँदैनन् भन्ने के छ ? विप्लवले सहमति गर्दैमा विप्लव पक्ष नै सबै सहमतिमा आए भन्ने के छ ? उनीसँग कति जमात थिए भन्ने कसले खाेजेकाे छ ? हिजाे प्रचण्ड राजनीतिमा आइसक्दा पनि विप्लव जंगलमै रहेकाेजस्तै अहिलेपनि उनका कति कमाण्डरहरू जंगल स्वतः छाड्छन् भन्ने आधार के छ ? के सरकारले ती हतियार र अन्य व्यक्तिहरूकाे नालीबेली पत्ता लगाउनुपर्दैन ? कि फेरी भाेली सरकारसँग असन्तुष्ट भएर जंगल छिर्न विप्लवलाइ स्वतन्त्रता प्रदान गर्न सरकार तयार भएकाे हाे ?
Previous articleविप्लवकाे सम्बाेधनकाे पूर्ण पाठ
Next articleमेराे शेयरकाे पासवर्ड बिर्सिनुभयाे ? यसरी गर्नुस रिसेट